Kufamba chipo, zviziviso zvina zvitsva zveApple Watch Series 3 | Ndinobva mac
Uye ndezvekuti zvinoratidza kuti mushandirapamwe weKisimusi ndewekubata ruoko, zvakanyanya patinowana nzira dzeApple dzeYouTube. Pane ino chiitiko, kuwedzera kune zviziviso zvitsva izvo zvichangoburitswa zveiyo iPhone X uye yayo Face ID, Apple inowedzera zviziviso zvina zvine hukama nazvo paYouTube chiteshi Spain Apple Watch Series 3, uye vese vane zita rekuti "Kufamba chipo."
Aya ndiwo ma ads akatotangwa pachiteshi chikuru cheYouTube kutanga kwemwedzi uno waZvita, asi izvozvi zvese zviripo pane chiteshi cheSpanish nedzimwe nyika. Ese ane nguva yakaenzana anenge masekondi gumi nemana uye tarisa pane zvingasarudzwa zveApple Watch Series 14, asi zviripachena mamwe ese eApple Watch mamodheru anoita zvakare kuongorora uku.
Mavari unogona kuona vhidhiyo inoenderana nemimwe mitambo uye ichiperekedzwa nemumhanzi. Hatipokana kuti vachakurumidza kutanga kuonekwa paterevhizheni.
1 Kufamba chipo - Nhabvu
2 Kufamba chipo - Kushambira
3 Kufamba chipo - ndinodzidzisa
4 Kufamba chipo - Snowboard
Kufamba chipo - Nhabvu
Iyi ndiyo yekutanga kushambadzira ine chekuita neinonzi mitambo yakanaka, nhabvu. Mune ino kesi iwe unogona kuona musikana achidzidzira freestyle bhora.
Kufamba chipo - Kushambira
Inotevera ine chekuita nekushambira uye dziva rinoonekwa nemusikana ari kudzidzira achangomugadzirira Apple Watch Series 3 kuti averenge madziva aanotora.
Kufamba chipo - ndinodzidzisa
Mune ino kesi, iyo AirPods inoonekwawo padhuze neApple Watch Series 3, hukama pakati pezviviri hunonakidza chaizvo uye Apple Music inogona kushandiswa kurovedza muviri uchishandisa smart brand nemahedhifoni.
Kufamba chipo - Snowboard
Chekupedzisira, munguva yatiri, haugone kupotsa sinou. Ivo vese vatove inowanikwa pane yeYouTube chiteshi cheApple Spain.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kufamba chipo, zviziviso zvina zvitsva zveApple Watch Series 3